स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव टेलिभिजनको माइक फालेर स्टुडियोबाटै हिडे – SajhaPana
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव टेलिभिजनको माइक फालेर स्टुडियोबाटै हिडे
साझा पाना २०७६ वैशाख ३० गते ०३:५७ मा प्रकाशित
३० वैशाख, काठमाडाैँ । सरकार छाड्ने तयारीमा रहेका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव टेलिभिजनको माइक फालेर स्टुडियोबाटै भागेका छन । संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण गरेर बनेको सामाजवादी पार्टीले जनतालाइ के दिन्छ भनेर पत्रकारले प्रश्नगर्दा उल्टै मिडियाले नेपाली जनताले के दिन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्दै उत्तेजित बनेका उपप्रधानमन्त्री यादव अन्तत टेलिभिजनबाट माइक फालेर बाहिरिएका हुन ।
उनीहरूबीचको सांसादका क्रममा पत्रकारले भन्छन
ए… तपाई नेपाली मिडियालाई शिष्टता सिकाउने ? इन्टरभ्यु लिने तरिका सिकाउने ? तपाई जान सक्नुहुन्छ । हामीलाई शिष्टता सिकाएर यहाँ आएर बकवास नदेखाउनुस् । प्रश्न सामना गर्ने हिम्मत छैन भने जान सक्नुहुन्छ ।
त्यसपछि फेरि पत्रकार पाण्डे भन्छन
हामी वहाँलाई आग्रह गर्छौं, आउनुस् र प्रश्नहरुको जवाफ दिनुस् । हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर बाहिरिनु भएको छ । उल्टै शिष्टता सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । तर हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिन …
ट्याग : #उपेन्द्र यादव